Mmekọrita Designer dị na a 20% ego | Esi m mac
Mmekọrita Designer dị na a 20% ego
Ọ bụghị ha niile bụ ngwa anaghị akwụ ụgwọ, mana na Mac App Store anyị nwekwara ike ịchọta ngwa nwere ike ibudata obere ego maka obere oge maka ego dị oke ọnụ, ma ọ bụ na ọ bụghị. Taa, anyị na-ekwu maka ngwa eserese ọkachamara ọkachamara maka Mac Affinity Designer, ngwa nwere ọnụahịa mbụ na Mac App Store nke 49,99 euro, mana nke ahụ maka obere oge anyị nwere ike ibudata ya na euro 39,99. Mmekọrita Designer bụ ndị kasị na kasị ezi vector graphic imewe mmemme na ahịa. Mmekọrịta na-enye anyị ohere ịmepụta eserese maka ibe weebụ, ihe mgbasa ozi, akara ngosi, imewe interface ma ọ bụ naanị maka ọchị.
Mmekọrita Designer-enye anyị ohere mbubata faịlụ na PSD format, ya mere, ọ dị mfe ịmekọrịta na ndị ọzọ na ọrụ okike. Na mgbakwunye, ọ dakọtara na PDF, SVG, AI, Freehand na EPS, nke na-enye anyị ohere ịnweta mgbanwe anyị chọrọ ma ọ bụrụ na anyị kpebie ịgbanwe ngwa anyị na-emebu maka Onye Mmebe Mmekọahụ, ma ọ bụ naanị ịme mgbanwe ụfọdụ.
Mmekọrita Designer Akụkụ
Ezigbo oge pan na mbugharị na 60 fps
Ndị gradients, mgbanwe, mmetụta na mgbanwe na ozugbo
Kachasị maka akwụkwọ nke ọ bụla mgbagwoju anya mbugharị ruo 1,000,000% na-enye ya zuru nkenke
Pixel na retina ele maka ezigbo oge vector art, guputa echiche, gbawara n'etiti ihuenyo mode mode
Ngwa ngwa ịgbanwee n'etiti ngwaọrụ na usoro nhazi maka imepụta ihe na-enweghị nsogbu
Ọkachamara ọkachamara CMYK, LAB, RGB na Grayscale agba
Njikwa agba ICC site na mmalite ruo na ngwụcha
Ihe nlere onyonyo site na iji Lanczos 3, Bicubic, Bilinear na uzo di nso
Ngwaọrụ vector siri ike nke na-arụ ọrụ n'ụzọ ha kwesịrị
Arụrụ aka mmetụta, agwakọta ụdịdị, oyiyi mgbanwe, na raster na vector masks iji na gị niile aghụghọ
Jiri ike nke vector na pikselụ were ohere zuru oke nke ụwa abụọ
Mkpịsị ederede kachasị mma, ọnụ, nhazi usoro, atụmatụ geometric na ụdị ngwaọrụ dị
Mgbanwe ederede na-agbanwe agbanwe tinyere nkwado OpenType zuru ezu
Ngwaọrụ pixel dị elu maka iji textures, masks, na nka rụchara. I nwekwara ike ịmepụta brọsh gị.
Ebe ọrụ kachasị mma iji mesie ọzụzụ imewe ike, gụnyere eserese weebụ, ihu ọrụ ndị ọrụ, mbipụta, yana nka echiche.
Onye Okike Mmebe54,99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mmekọrita Designer dị na a 20% ego
Apple weputara nkwuputa izizi nke Macbook Pro ohuru ya na ihe kacha mkpa
Mee ngwa ngwa na Safari site na iji ụzọ mkpirisi keyboard a